Misaona ny hiran'ny filoha mpanorina Kenneth Kaunda i Zambia: Fihavanana, fizahan-tany, fiovan'ny toetr'andro no hirany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Zambia » Misaona ny hiran'ny filoha mpanorina Kenneth Kaunda i Zambia: Fihavanana, fizahan-tany, fiovan'ny toetr'andro no hirany
Birao fizahantany afrikanina • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • People • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany • Vaovao Mafana Zambia
Fantatra amin'ny maha filoham-pirenena mpihira azy, Kenneth Kaunda dia nodimandry androany tao Lusaka, Zambia, taona 97. Namela hira iray izy namintina ny fahitany ny Peace Through Tourism, Climate Change, ary ny fizahantany afrikanina.
Ny fizahantany afrikanina, ny fiovan'ny toetrandro dia ampahany amin'ny vinan'ny filoha mpanorina. Henoy ny hira natolony nankalazana ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany.
Ny filoha mpanorina an'i Zambia dia maty, taona 97. Izy dia hita ho mahery fo nasionaly, olom-panjakana ambony, tompon-daka tsy ho an'i Zambia tena tiany ihany fa ho an'i Afrika manontolo.
Ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany dia naneho ny fiaraha-miory tamin'ny Governemanta sy ny Vahoakan'i Zambia ary tamin'ny fianakavian'i Kaunda tamin'ny fahafatesan'ny filoham-pirenena Zambia teo aloha Kenneth Kaunda niaraka tamin'ny fanambarana navoakan'ny filoham-pirenena sy ny filohan'ny ATB.
Maherifo iray ho an'i Zambia sy filoha mpanorina izay mino ny fizahantany ho mpamilin'ny fandriampahalemana eran-tany no nodimandry tany Lusaka androany. Kaunda dia filohan'i Zambia tamin'ny 1964 ka hatramin'ny 1991.
Tamin'ny Mey 2011, ny Filoham-pirenen'i Zambia voalohany, Kenneth Kaunda, no nanao ny lahateny fanokafana ny IIPT (Ivontoerana iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany) any Lusaka. Nasehony tamin'ny hira iray ny fahitany an'i Zambia sy ho an'ny Peace Through Tourism.
Cuthbert Ncube, ny filohan'ny Birao fizahantany afrikanina, namoaka hafatra nilaza hoe: “Namoy fanjakana ambony i Afrika, Pan-Afrikanista iray - Dr. Kenneth Kaunda - ny rain'i Zambia. Enga anie ka handry fahizay izy. Ary manohy miady ho an'i Etazonia Mitambatra amin'ny alàlan'ny fizahantany izahay ho sehatra iray mampitambatra. "
“Ny filoha teo aloha Kaunda dia mpanohana mafana ny fizahantany ho an'i Zambia sy Afrika manontolo. Niaro ny olan'ny fiovan'ny toetrandro izy, ary koa ny Peace Through Tourism, "hoy izy Tambajotra fizahan-tany manerantany Ny filoha Juergen Steinmetz, izay naka ny horonantsary filohan'ny filoha nihira tamin'ny fihaonambe IIPT tamin'ny 2011 ihany koa.
Alain St. Ange, minisitra fizahan-tany Seychelles, ary ny filoha voalohany Kaunda, Zambia
“Nahafinaritra ahy sy voninahitra ny nihaona tamin'ny Filoha Kaunda tamin'ny fotoana maro nanirahana ahy tamin'ny asako izay minisitry ny Seychelles tompon'andraikitra amin'ny fizahan-tany. Lehilahy iray tamin'ny vahoaka izy, ary rehefa nanofahofa ny mosara fotsy ho marika famantarana izy, dia niditra tamina fihaonambe tamin'ireo mpandahateny mpandahateny niaraka tamin'io fahasoavana sy fanetren-tena io ihany. Ny fifanakalozan-kevitray momba an'i Afrika sy ny toe-tsaina Pan-Afrika dia manazava hatrany ary manome valisoa manokana, "hoy i Alain St.Ange. ny filohan'ny Birao Afrikana momba ny fizahantany.
Ny filoha Kaunda dia nihaona tamin'ny filoham-pirenena ATB St. Ange tao amin'ny International Peace Park in Livingstone nandritra ny hetsika fambolen-kazo IIPT ho fanamarihana ny UNWTO General General Assembly izay nokarakarain'i Zambia sy Zimbabwe.
Louis D'Amore. Ny faramparany Akel Beltaj, ny tara Kenneth Kaunda
Louis D'Amore, mpanorina ary filohan'ny International Institute for Peace amin'ny alàlan'ny fizahan-tany (IIPT) dia nilaza eTurboNews androany: “Malahelo mafy ny IIPT tamin'ny fahafatesan'ny namana sakaizan'ny IIPT sy ny rain'i Zambia.” IIPT dia nanolotra ny filoha Kaunda ny vidin'ny fandriam-pahalemana tamin'ny taona 2008 tany Zambia ary tamin'ny 2013 indray tamin'ny andro fanokafana ny Fivoriamben'ny UNWTO faha-20 any Zambia sy ZImbabwe.
Luis D'Amore & ny filoha farany Kaunda tamin'ny lanonana fambolen-kazo tao Zambia 2013
Namboleny ny hazo fandriam-pahalemana voalohany niaraka tamin'i Dr. Taleb Rifai, sekretera jeneralin'ny UNWTO tamin'izany fotoana izany.
Misaotra ny filoha nodimandry, fanintelony izao i Zambia no tao amin'ny Ivotoeran'ny fandriam-pahalemana tamin'ny alàlan'ny fizahan-tany tamin'ny taona 2013. Taorian'ny fampiantranoana hetsika iraisam-pirenena roa ho an'ny International Institute for Peace Through Tourism (IIPT), ary taorian'ny nanokanana an'i Victoria Falls ho Peace Park 3 taona maro talohan'izay, hentitra amin'ny fanolorantenany i Zambia hanohana ny fandriam-pahalemana sy ny fizahantany.
Kenneth Kuanda sy Walter Mzembi
Walter Mzembi, Minisitry ny fizahantany taloha ho an'ny Zimbabwe, nisioka hoe: "Sarin'ny Patriarka, Ray mpanorina, Stateman, Liberator, Humanist & Philanthropist! Izahay dia niorim-paka 100, fa misaotra an'Andriamanitra Tsitoha izahay noho ny fitahianao nandritra ny 97 taona. Nahazo ny fatiantoka tsy azo soloina antsika ny lanitra. ”
Nanamafy ny fanoloran-tena ho amin'ny “fandriampahalemana” i Zambia
Ny mari-pamantarana mariky ny filoha Kaunda rehefa nivoaka izy ary nihaona tamin'ny mponin'i Zambia dia nanofahofa ny mosara fotsy.